My freedom: Sharing Happiness ♥
နေရာက East Coast Goldkish Restaurant.. အဲ့မီးခွက်လေးတွေ နှင်းဆီပွင့်ဖတ်လေးတွေက မေချိုကိုယ်တိုင် လုပ်ထားတာတွေ။ Restaurant က လုပ်တဲ့ ဒီဇိုင်းမဟုတ်ဘူး။ အရမ်းသဘောကျတယ်။
မေချို့တူလေး.. တနှစ်ကျော်ကျော်ပဲ ရှိသေးတယ်။ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ သူနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တာ ငြိမ်ငြိမ်မနေတော့ ၀ါးသွားတယ်။ ကန်ဒီ ကလေးချစ်တတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးချစ်အောင် မပြောတတ်ဘူး။ ဘယ်လိုပြောမလဲ... ကလေးသဘောကျအောင် မလုပ်ပြတတ်ဘူး။ တကယ်တော့ လူကြီးချစ်အောင်လည်း မပြော/မလုပ်တတ်ပါဘူး(>.<)။ ကန်ဒီ့မှာ ခုထိ တူတွေ တူမတွေ မရှိသေးဘူး။ အရမ်းလိုချင်တယ်။ အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့အစ်ကိုတယောက်ကလည်း ခုထိ ကလေးမရသေးဘူး >.<
ဒီပိုစ့်လေးက သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အပျော်တွေ မျှဝေတာဆိုလည်း မမှားဘူးပေါ့ :D
မစွံတဲ့သူတွေ ပိစိ မွေးနေ့ပွဲကို တက်ရောက်ကြကုန်လော့။
ဤနှစ်၌ မွေးနေ့ပွဲတက်ရောက်အံ့၊ လာမည့်နှစ် ဒွယံဒွယံ ဖြစ်ရလတ္တံ့တည်း။း)
အပျော်တွေ ဝေမျှခံစားသွားပါတယ် ^^
အစ်မ အဲ့လိုတွေရှောက်ရှောက်မတင်နဲ့ . အပျိုဂျီးတွေငိုလိမ့်မယ်...(မြင်နေပီနော်.ဒီကွန်မန့်ကြီးကိုကြည့်ပြီးနှုတ်ခမ်းကြီးကိုက်နေတာ..ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိတယ် ဟိဟိ..)
ဒီနှစ်မွေးနေ့ကျရင် အိကုကို ဖိတ်ပါ.. မလာလည်း သွားခေါ်ပါ....
ဟိုလူကြီးက ဦးကျောက်ပိဆိုတာကြီးမလား.. :D ဒယ်အိုးခေါက်နေတာ တခါတွေ့တယ်..။
ကန်ဒီ ၀ လာတယ်ဆိုတာ ဟုတ်တယ်ဗျ
ကဲ ကန်ဒီတို့ ကိုဘယ်တော့ လဲ ဟဲဟဲ
မင်္ဂလာသတင်းကိုတော့ blog မှာပဲ စောင့်ကြည့်တော့မယ်
U Kyauk Pi :P
ဟုတ်တယ် ကိုညိမ်းနိုင် တို့နဲ့ဆိုင်းဘူး)..
အဲသည်လို သူငယ်ချင်းတွေ ဆုံရတဲ့ပွဲမှာ သူကြီးမင်းတို့ ကိုညိမ်းနိုင်တို့ကို ဖိတ်ပါ သူတို့ခမျာ သနားပါတယ် ဘေးကမှမချွန်ရင် စွန်မည့်သူတွေမဟုတ်ဘူးရယ်း)။
ထိုသတို့သား သတို့သမီး တို့သည်လည်း
ယနေ့မှစ၍ သားသမီးပေါင်း တစ်သောင်းခြောက်ထောင် နှင့် အိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစေဗျာ။
အထူးသဖြင့်ပြောလိုသည်မှာ လူပျိုကြီး အပျိုကြီးများအား ကမ္ဘာ့လူဦးရေ တိုးပွားရေးကို အကြီးအကျယ် နှောက်ယှက်မှု့နဲ့ တရားစွဲဖို့ ပြင်နေပါတယ်....။
ဒါ သူတို့ပေးတာ။ အဲ့ဒါကို ဘယ်လိုခေါ်လဲ? မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာ လာတဲ့သူ အားလုံးကို ပေးတဲ့ဟာလေ.. ==> door gift :)
အဲ့လိုခေါ်တာလား.. ဟီးဟီး... ကျေးဇူး :D
Idea လေးအရမ်းကောင်းတယ် Candy ရေ။ သတို့သားနဲ့ သတိုးသမီးတို့ ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ သေတပန်သက်တဆုံး ပေါင်းသင်းနိုင်ပါစေခင်ဗျာ။ :)
မမကန်ဒီ မင်္ဂလာဆောင်ရင် ဖိတ်လိုက်နော် စင်္ကာပူထိ တကူးတက လာခဲ့မယ်လေ :)
အာဝါဟ၊ ၀ိဝါဟ ပွဲတွေသွားပါများရင် ဓာတ်သက်သွားရာ ပညတ်ပါတတ်သတဲ့... ဘယ်တော့လဲဗျို့.. ဖိတ်စာဝေနော့..
သတိုးသမီး သတိုးသားလေးတို့အတွက် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်ကွယ်။
သကြားလုံးလေးရဲ့ပွဲကိုလည်း ကြည့်ချင်ပါသေးတယ်း)